Abwaan Axmed Siciid Afgudhiye Shumuc Ka Damay Afka, Dhaqanka iyo Suugaanta (1964-2018),Q2aad – Heemaal News Network
Abwaan Axmed Siciid Afgudhiye Shumuc Ka Damay Afka, Dhaqanka iyo Suugaanta (1964-2018),Q2aad
Qormadii Labaad ee Bogg Kamid ah Taariikh Nololeedkii Marxuum Abwaan Axmed Siciid Diiriye(Afgudhiye),oo Hadhwanaagnews Taxane idiinku soo gudbineyso,Waxaana idiinka Diyaariyey sidaan hore usoo xusney Aqoonyahan Cabdirisaaq Saalax Warsame.
Maalintii dambe ayaan gurigiisa ku booqday. Isaga oo markaa iska xanuunsan, oo tabaalaysan. Waxa aan is waydiiyay waxa aan u qaban karo. Waxaa igu soo dhacday in aan suugaantiisa weeleeyo, oo inta uu nool yahay buug u iibsama qoriddiisa aan ka caawiyo. Si ay isna wax ugu tarto; magac ahaan iyo manfac ahaan, oo uu baahida yaboohda uga maarmo; suugaantiisuna u noqoto mid weelaysan oo si cilmiyaysan buug qurux badan oo la akhrisan karo dadku uga raacan karaan. Isna sharaf iyo faa’iido ayay u ahaan lahayd, dadka maanta raadinaya suugaantiisii, isaga iyo in badan oo la mid ahibaay badideeda la hoydeenna raadcadeedauga baaqsadaan.
Nasiib darro buuggaasi ma soo bixin, arimo farsamo iyo duruufo jiray aawadeed. Wax yar haddii aan ka qabtayba, si deg deg ah ayaan Hindiya ugu baxay. Haddii aan soo laabtayna, isagii ayaa i waydaartay oo Hindiya loo qaaday. Hawshaasi waa mid wali joogta, cid kasta oo ururinta Abwaankawaxa aan jeclaan lahaa in aanu si uun isku haleelno.
Haddii aynu shaqsiyaddiiabwaanka iyo suugaantiisaba wax kaga noqono, af-Gudhiye waxa uu ahaa nin dhaqanka Soomaaliga aad u yaqaan. Nin suugaanta u abtiriya. Afka Soomaaligana ah Diiwaan uu hadhsado. Nin yaqaan godadka suugaanta iyo sida ay u kala saamayn badan yihiin. Intii aan suugaantiisa darsanayay, waxyaabaha aadka iiga yaabiyay ee uu abwaanku gaarka ku ahaa waxaa ka mid ahaa; in godka ugu badan ee uu maansooyinkiisa iyo heesihiisa ugu shilis uu ku abyay uu ugu wayn yahay godka “Hobeeya, Hobeeya”. Waa godka ay hooyadu ubadka ugu heesto (Hobeeya, Hobeeya, Hobeeya… Af-yare Wiilkay samoowah… )
Waxa aad halkaa ka garankartaa Af-gudhiye halka uu bulshada u taagnaa, Waxa uu bulshada u ahaa iyo sida lexo-jeclada leh ee uu waxsheeggooda ugu dirnaa. Waxa aynu odhan karnaa, Af-gudhiye – iyo in badan oo la mid ahiba – waxa ay bulshada u joogaan halka uu waalikdu ubadka u taagan yahay!
Waxyaabaha uu xaq-u-dirirka intiisa badankaga duwanaa waxaa ka mid ahaa; af-Gudhiye waxa uu ahaanin ka maansoodamawaadiic bahdiisa maansooleydu inta badanaanay iskuba hawlin. Tusaale ahaan, suugaanleyducidda ugu badan ee ay warmaha ku fiiqaan waa cidda hadba majaraha ummadda haysa – siyaasiyiinta iyo maamulka hadba jooga. Isagu waa uu ka duwanaa. Waa ninka qudha ee bulshada loo adeegayo iyagana koobka dhaliisha markooda dhansiiyay.
waxay kugu xantaan xigtiyoinaad, xayn yar korisaaye
Abwaanka mawduucyada adag, sida; Siyaasadda, Nolosha, Dhaqanka, Waxsheegga, iwmoo qudhahi ma ahayn ardaa dhigiisa. Waxa uu ahaa, sidoo kale, xiddigiye galay hawada mucaashaqiinta oo baalasha ku kala fidsaday. Waxauuabyay tulud heeso ah oo caan baxay oo caashaq gaamuray ku xaradhaaminaya, qaarkoodna aanay isaga laf ahaantiisa dhanna u dhaafsanayn.
Ciidamada Masar Oo Sheegay Inay Guulo ka Gaadheen Dagaalka ka Dhanka ah Muslimiinta Sinai.
Wax-garad ka Hadlay Qaban-qaabada Caleema-saarka Suldaanka Beesha Abrayn Oo ka Socota Degmada Garbo-dadar.
Suldaanka Beesha Gabooye Ee Awdal Oo Somaliland Farta Ugu Fiiqay Dariiqa Aqonsi Lagu Heli Karo.
March 28, 2018 Soomaaliya